च्याम्पियन बन्ने हुटहुटीले लखेटेपछि...
२०७६ फागुन १५ बिहीबार ०७:४२:००
काठमाडौं । मेरा लागि पहिलो साग । तीन करोड नेपालीको ध्यान हामीतिर । खेल भन्दाअघि जे जति साथ, सहयोग र हौसला मिल्यो, त्यो सबै जितका लागि थियो । तेक्वान्दोमा नयाँ इतिहास रच्ने जिम्मेवारी हामीलाई नै थियो । टिम इभेन्ट भएकाले थोरै डर पनि । यदि मैले हारें भने के हुन्छ ? म राम्रो खेल्दा पनि साथीहरूको खेल बिग्रेर स्वर्ण नै गुमाउनु पार्‍यो भने ? सन्जिला तिमल्सिनाको भित्री मनमा यस्तै कुराले ठाउँ ओगटेको थियो ।
सन्जिला घरेलु मैदानमा सम्पन्न भएको १३ औँ सागमा स्वर्ण जित्ने खेलाडी हुन् । १८ वर्षको उमेरमानै ठूलो सफलता हात पारेकी सन्जिलालाई हाल तेक्वान्दो प्रति बेग्लै मोह जागेको छ । सानैदेखि फाइट गेम खेल्न रुचाउने उनले कक्षा ४ पढ्दादेखिनै तेक्वान्दो खेल्न थालेकी हुन् । नौ वर्षे उनको तेक्वान्दो यात्रामा यो पहिलो सफलता हो ।
सागभन्दा पहिले उनले प्रदेश तीनबाट आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएकी थिइन् । उनी उक्त प्रतियोगिता तेस्रो भइन् । पहिलोपटक ठूलो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा पाएको त्यो सफलता सानो थिएन तर तेस्रो स्थानले च्याम्पियन बन्ने हुटहुटी जगायो ।
सन्जिलाले १३औँ सागको बन्द प्रशिक्षणमा भाग लिने अवसर पाइन् । उनले सागमा सहभागिता जनाउँने पक्का नहँदासम्मसँगै तयारी गर्ने साथीहरूले यो मात्र तयारी गर्न आएकी होला भन्ने सोच्थे । उनलाई भन्न भने सकेनन् । केही समयपछि उनले सागमा सहभागिता पाउने पक्का भएपछि सबैको मुख थुनियो । उनलाई जिम्मेवारी बढेको महसुस भयो । त्यसपछि उनको मुख्य लक्ष्यनै देशका लागि स्वर्ण जित्ने बन्यो । उनलाई सफलता हात पर्‍यो पनि । सन्जिलाले निशा दर्नाल, स्वस्तिका तामाङसँग मिलेर २३ वर्ष मुनिको पुम्सेतर्फ महिला टिम इभेन्टमा स्वर्ण जितेकी थिइन् ।
“मेरो पहिलो साग । अलि कति डर, धेरै हौसला र उच्च मनोबल लिँदै प्रतिस्पर्धाका लागि गएँ । चारैतिर हौसलाको माहोल थियो । मसँगैका साथीहरू पनि जोसका साथ अघि बढे । मनमा बेग्लै किसिमको जोस थियो । एक मनले सोचिरहेको थियो । सबैको साथ छ । हामीले किन नजितौंला र ? अर्काे मनले सुस्तरी घचघच्याउँथ्यो तैले हारिस् भने त सबैलाई निराश बनाउँछ । केही नर्भस थिएँ । मेरालागि अर्काे गोल्ड फर्केर आउँदैन । सबैको साथसँगै गयौं अनि सफलतामिल्यो पनि,” सन्जिलाले भनिन् ।
अहिले सन्जिलाको तेक्वान्दोसँग बेग्लै सम्बन्ध छ । सानो उमेरमा ठूलो सफलता हात पारेकी उनी अहिले सागमा स्वर्णको ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यमा छिन् । यस पछिका सागमा व्यक्तिगत विधातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उनको लक्ष्य छ । उसोत टिम इभेन्टले उनलाई केही फरक पारेको छैन तर, टिम इभेन्टमा च्याम्पियन हुनु भन्दा एक्लै च्याम्पियन हुने कुरामा बेग्लै मज्जा आउने उनको बुझाइ छ ।
“टिम इभेन्टमा डर लाग्छ । अरु कहीं चुके भने मैले पनि हार्नुपर्छ। मैले गल्ति गरेँ भने अरूलाई नराम्रो हुन्छ ।अब आउने सागमा व्यक्तिगत विधामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछु । जिते मैलाई सफलता मिल्छ । हारे पनि मैले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसैले एक्लै च्याम्पियन बन्ने रहर जागेको छ । मलाई लाग्छ यसमा सफलता पनि मिल्छ मलाई,” सन्जिलाले भनिन् ।
सन्जिलाको अबको लक्ष्य भनेको एसियन गेममा सफलता हात पार्नु हो । उनलाई एसियन गेममा सफल हुँदै नेपालका लागि अर्काे स्वर्ण जित्ने उनको लक्ष्य । एसियन गेममा नै स्वर्ण जित्न सके ठूलो सफलता मिल्ने उनको भनाइछ । सानो उमेर तर, यो सफलता दिलाउन सबैको साथ र आफ्नो मिहिनेतको खाँचो भएको सन्जिला बताउँछिन् । सन्जिलालाई तेक्वान्दो करियर सुरुआतदेखिनै नोर्बु लामाले प्रशिक्षण दिँदै आइरहेका छन् ।
“मेरो अबको लक्ष्य नै एसियन गेममा सफलता हात पार्नु हो । त्यसका लागि आजैदेखि मिहिनेत गरिरहेकी छु । यदि यसियन गेममा पनि सफलता हात पार्न सकेमा खेल जीवनले बेग्लै सफलता मिल्नेछ । मेरो खेल जीवनले पनि पूर्णता पाउनेछ,” सन्जिलाले भनिन् ।
सन्जिला अहिल आफू खेलाडी भएकोमा धेरै खुसी छन् । कारण उनकै खेलले गर्दा परिवारका सदस्यले पनि नयाँ जीवन पाएको महसुस गरेका छन् । पारिवारिक समस्यासँग जुध्न सन्जिलालाई १२ कक्षापछि विदेश जाने सोच नआएको होइन । त्यसलाई थाति राखेर आफूलाई खेलमा परीक्षण गरिन् । ‘‘एकपटक खेल्छु सफलता मिल्यो भने अगाडि बढ्छु, नत्र विकल्पको खोजी त छँदै छ नि,’’ उनले भनिन् । सफलता मिल्यो पनि । अब यही यात्रालाई निरन्तर दिने योजनामा छिन् उनी ।